WARARKA BARAAWEPOST Arbaco 2 January 2013
38 ka mid ah dareewalada gaadiidka ciidanka booliska soomaaliyeed oo maanta tababar loo furay.
Waxaa maanta xarunta gaadiidka booliska soomaaliyeed ee ku taal degmada Cabdicasiis tababar loogu furay 38 askari oo ka mid wadayaasha gaadiidka ciidanka booliska soomaaliyeed.
Tababarkan oo uu maalgalintiisa lahaa xafiiska siyaasada Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa munaasabad furitaan ahayd oo lagu qabtay xarunta gaadiidka boliiska waxaana kasoo qayb galay wasiir u dowlaha iyo ku xigeenada wasiirka wasaarada arrimha Gudaha iyo amniga Qaranka,taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo Saraakiil kale waxaana xubnihii ka hadlay dhamaantood ay aad Ugu booriyeen darawalada la soo xulay in ay ka faa�iideystaan Duruusta la siinayo.
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/gaas Shariif Sheekhuna Maye oo goobta ka hadlay ayaa kula dardaarmay xubnaha tababarka qaadanaya in ay ka faa�iideystaan casharada lagu barayo tababarkan islamarkaana ay dhowraan waqtiga loogu talagalay furitaanka barnaamijka isagoo dhanka Kalena sanadkan cusub ku tilmaamay inuu noqon doono sanadkii ciidanka Booliska Soomaaliyeed maaddaama tababaro isku xig xiga ay heli doonaan.
Wasiir u dowlaha wasaarada arimaha Gudaha iyo amniga Qaranka Mudane Mahdi Maxamuud Cali oo furay siminaarka ayaa waxa uu Talaabo wanaagsan ku tilmaamay tabaarada noocan oo kale ah isagoo Xubnaha loo soo xulayna ku booriyay in ay ka faa�iidaystaan si iyaguna ay uga faa�iideeyaan darawalada kale ee saaxiibadooda ah.
Sidoo kale 200 oo askari o oka tirsan CBS ayaa iyaguna mudd oka yar laba toddobaad gudahood tababar ugu kicitimi doona waddanka Jabuuti iyadoo tababarkaasna ay siin doonaan saraakiil ka socota ciidamada loo Yaqaan Carabinieri ee dowladda Talyaaniga.
Tababaradan is xig xiga ee uu taliyaha ciidanka Boolisku sheegay ayaa waxa looga gol leeyahay kor u qaadida garaadka iyo aqoonta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed kaas oo hadda dib u dhiskiisu uu meel wanaagsan soo gaaray marka loo eego sida burburkii Dalka ka dhacay uu u saameeyay waxaana hubaal ah hadii Howshaan tababarka la jookteeyo in wax weyn ay iska badali Doonaan tayada ciidanka Booliska soomaaliyeed.
Horumarka uu sannadkan gaaray ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa marqaati ah waxyaabihii ay ku soo bandhigeen dabaaldegga sannadguuradii 69aad ee aasaaskii ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee lagu qabtay magaalada Muqdisho 2 december 2012.